Waterfox: Ezigbo ihe nchọgharị weebụ na-akwụghị ụgwọ, na-emeghe na onwe ya | Site na Linux
Fewbọchị ole na ole gara aga, kpọmkwem ihe 25 August 2020, igba egbe nke 2020.08 mbipute na Ihe nchọgharị Waterfox, nke tinyere mmelite nche na ụfọdụ mgbanwe na njirimara ya.
Mmiri Firefox ugbu a na-ewere dị ka a magburu onwe ọzọ na ihe nchọgharị weebụ ọdịnala, dịka Firefox na Chrome, ọ bụghị naanị maka ịbụ enwere onwe, imeghe, ikpo okwu na nke onwe, ma maka usoro nchekwa na nzuzo ya, na mgbakwunye na obere nchekwa nke ebe nchekwa RAM.
Ọ bụ ezie na Blog Site Linux, n’oge gara aga anyị ekwughi n’uju Mmiri Firefox, Anyị ekwuola ya n'oge gara aga, dị ka ntinye na-esonụ, na anyị na-akwado na-agụ ka emechara ederede a, onye nwe ya bu Mmemme ngwanrọ kacha mma maka GNU / Linux Distros nke 2020:
1 Waterfox: Ihe nchọgharị weebụ kachasị mma
1.2 Ozi banyere ụdị kachasị dị
Waterfox: Ihe nchọgharị weebụ kachasị mma
Dị ka gọọmentị webụsaịtị na Ihe nchọgharị weebụ nke Waterfox ọ na-nanị kọwara dị ka:
"Ihe nchọgharị 64-bit dabere na ikpo okwu na-emeghe na oghere nke Mozilla".
Otú ọ dị, Waterfox dika Onye Mmepụta (s) Ọ bụkwa:
"Otu n’ime ihe nchọgharị 64-Bit nke mbụ kesara na weebụ, nke nwetala nnukwu ndị na-eso ya (ndị ọrụ). Karịsịa, ebe ọ bụ na mbido ọ butere esemokwu nke ọsọ ọsọ, mana ugbu a, ọ na-agbalikwa ịbụ ihe nchọgharị ụkpụrụ omume na nke onye ọrụ.". Banyere Waterfox
Ya mere, ọ na-atụle a ndụdụ nke Mozilla Firefox emepụtara nke ọma ma rụọ ọrụ kacha mma 64-bit Ọrụ Systems, ihe ùgwù nzuzo na nhọrọ onye ọrụ.
Mmiri Firefox ugbu a nwere ihe ndị a atụmatụ na arụmọrụ Isi ihe:
Otu ojiji lekwasịrị anya n’inye ndị ọrụ ohere ịhọrọ: Ihe nchọgharị ahụ na-elekwasị anya na ndị ọrụ dị ike, na-enye gị ohere ịme mkpebi ndị dị mkpa. O nweghi nkpanye whitelist ọ bụla, ịnwere ike ịgbatị ndọtị ọ bụla ịchọrọ ma enweghị ozi ma ọ bụ telemetry zigara Mozilla ma ọ bụ ọrụ Waterfox.
Ozi banyere ụdị kachasị dị
Mmiri Firefox, dị ka Firefox na-enye ọtụtụ ihe nchọgharị maka mmelite kwa afọ. N'okwu nke Mmiri Firefox, enwere Blọgụ gọọmentị ịkpọsa ha. Dị ka anyị kwurula na mmalite nke akwụkwọ a, maka ụbọchị a 2020.08 mbipute nke na-etinye ụfọdụ mmelite nche na mgbanwe ụfọdụ na njirimara ya, ma na nke ugbu a na nke Omuma.
Ọ dị mma iburu n'uche na:
Waterfox Ugbu a ọ dabere na Firefox Quantum, ebe Waterfox Classic gbadoro ụkwụ na Firefox ESR. Waterfox Ugbu a, dị ugbu a na Firefox 68, ma jiri DAV1D kpọọ av1 na usoro Servo iji nye weebụsaịtị, yabụ arụmọrụ ka mma. Ọ na-akwado CSD, ma nwee ikike igosi ọkwa ọkwa, gbanwee ọnọdụ nke ogwe ngwaọrụ ibe edokọbara, ọnọdụ nke njikwa windo, ọnọdụ nke ogwe taabụ, n'etiti nhọrọ ndị ọzọ.
"Waterfox Ugbu a: Jiri ụdị Waterfox a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe ọhụụ kachasị dị n'ịntanetị ga-enye, ịchọrọ iji WebExtensions niile na mgbakwunye Bootstrap".
"Mmiri Waterfox: Jiri ụdị Waterfox a ma ọ bụrụ na ị hazie ihe nchọgharị gị na plugins NPAPI dị iche iche na mgbakwunye bootstrap na-emelitebeghị dịka WebExtensions ma ọ bụ maka Waterfox Current".
En Windows na MacOS ọ arụnyere na-ejikarị ya installer faịlụ. Na Linux, ọ nwere ike na-arụnyere na maara ụzọ, site na nbudata na faịlụ tar.gz dị ma na -emepụta ụzọ nnweta ozugbo, enwere ike gosipụta ya ọtụtụ ugboro na Firefox.
Na site na itinye ochichi ndi ozo ma wụnye ngwugwu "Waterfox-kpochapụwo" ma ọ bụ "mmirifox-ugbu a"gbakwunyere ngwungwu asụsụ Spanish ha dị iche iche (waterfox-kpochapụwo-i18n-es-es ma ọ bụ waterfox-ugbu a-i18n-es-es). Ma ọ bụ jiri ikpeazụ iji faịlụ .Ihe omume dịnụ.
Maka ozi ọzọ banyere ya, ị nwere ike ịga ya ukara website na GitHub.
N'ikpeazụ, anyị na-ahapụ slogan nke kwuru nchọgharị na weebụ nke chịkọtara nkà ihe ọmụma ya nke ọma:
"Chọgharịa weebụ n'ụzọ gị, jiri ihe nchọgharị weebụ na-adịghị ọcha".
Cheta na: M ugbu a na-eji ya dị ka otu nchọgharị na weebụ n'elu m omenala na kachasị mbipụta Linux MX oku Ọrụ ebube. Linux MX wetara ya agwakọta ya na nchekwa ya. Enwere m ike ịgbakwunye nke ahụ, na nke m, achọpụtara m na oriri RAM dị ntakịrị ma ọsọ ya ma ọ bụ arụmọrụ ya ka mma mgbe ị na-eme nchọgharị.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Waterfox», nke e mere taa dị ka a magburu onwe ọzọ na ihe nchọgharị weebụ ọdịnala, dịka Firefox na Chrome, ọ bụghị naanị maka ịbụ enwere onwe, imeghe, ikpo okwu na nke onwe, ma maka nchekwa na iwu nzuzo ya, ọ nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka mmadụ niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Waterfox: Ezigbo ihe nchọgharị weebụ na-akwụghị ụgwọ, na-emeghe ma na-anọghị na ya
Enwere m olileanya na m ga-enweta nkuchi, mana ọ ga-adị mma ịhụ
appimage download ma ọ bụ ihe ochie version na anaghị emelitere m (M ga-ahọrọ a download si ukara na peeji nke)
Ekele m, Nemecis 1000. Daalụ maka okwu gị. Ee ee, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na obere ihe nchọgharị a sitere na Firefox na-eto eto * .deb na * .rpm iji mee ka ọ dị mfe (akpaghị aka) iji wụnye, jikọta, ma na-agba ọsọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ distro ọ bụla dị ugbu a.
Independent enweghị ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụrụ na Firefox nwụrụ echi oriri ahụ gafere.
Ekele | 1ch. Daalụ maka okwu gị. O kwenyere na ọ bụrụ na echi Mozilla Foundation akwụsịchaa ijikwa, ịkwado ma ọ bụ imekọrita na mmepe nke Firefox ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ SL / CA na GNU / Linux oru ngo, Waterfox onye nrụpụta ma ọ bụ ọrụ mbupute ha ọzọ, nwere ike ịga n'ihu na-eduzi ụzọ ahụ. mmepe onwe gị nke ndụdụ gị. Ebe ọ bụ na, maka nke ahụ, ha kwesịrị ịbụ SL / CA na GNU / Linux, ya bụ, nke mere na onye ọ bụla n'otu n'otu ma ọ bụ dịka otu, n'adabereghị na ya nwere ike ịga n'ihu na-azụlite ya n'ụdị ma ọ bụ ọhụụ ha.
Sima 78 dijo
Edemede mara mma, ebipụtara m n'asụsụ French na blọọgụ m na blog nke dabere na nke a (njikọ na njedebe nke edemede m), n'aka nke ọzọ, maka nhọrọ nke asụsụ m họọrọ maka faịlụ xpi, nke bụ ezigbo nhọrọ n'agbanyeghị nkesa.
Ekwuru m na ihe ọ bụla nkesa ... Nke a dị irè maka faịlụ xpi, mana nsụgharị Waterfox 2020, maka m, na-arụ ọrụ na kọmputa m n'okpuru Ubuntu 18.04 (n'ezie na 20.04) Debian Buster mana ọ bụghị na Debian Stretch (nsogbu ọbá akwụkwọ ).
Ndoo ma oburu na Spanish m adighi nma.
Ekele m, Sima78. Daalụ maka onyinye mmụta gị maka Waterfox, enwere m obi anụrị na ọ masịrị gị. Blog gị na French dị ezigbo mma ma na-arụ ọrụ. Ihe ịga nke ọma na ngọzi nye gị.